🥇 ▷ Xiaomi Mi Max 3 rasmi ah: aad ayey u weyn tahay oo ma ogin inaanu kaniini ugu yeerno (sawirro iyo muuqaallo) ✅
Xiaomi Mi Max 3 waxay sii daciifineysaa xadka horey u khafiifsanaa ee u dhaxeeyey taleefanka casriga ah, wajiga hore, kiniiniga iyo wax dhexda ku jira. Markay tahay 6.9 “si dhib yar ayaa loo gartaa, oo waxaad u baahan doontaa jeebka dheer halkii aad gudaha ku dhigi lahayd. Laakiin waxaad yeelan doontaa 6.9 inji!
Xiaomi Mi Max 3: Faahfaahinta Farsamada
Shaashadda: 6.9 ”IPS buuxa HD + (1.080 x 2.160 pixels, 18: 9), isbarbardhig 1.500: 1, 84% NTSC gamut midabka
Xusuusta gudaha: 64/128 GB eMMC 5.1
Qalabka gadaal gadaal: 12 megapixel sony IMX363, f / 1.9, pixel of 1.4 μm + 5 megapixel Secondary
Kaameerada hore: 8 megapixels oo leh nal iftiin leh, 1.12 μm pixels, f / 2.0
Isku xirnaanta: hybrid dual SIM (nano + nano / microSD), dual VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4 / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, infrared
cabirrada: 176.15 × 87.4 × 7.99 mm
Miisaan: 221 garaam
Bateriga: 5,500 mAh oo leh Lacag Deg deg ah 3.0
OS: Android 8.1 Oreo oo leh MIUI interface
Xiaomi Mi Max 3 Waxay leedahay jir bir ah, kaas oo leh aqriska sawirka faraha faraha gadaasheeda, laakiin waxaa sidoo kale jira wejiga furfuran leh kaameerada hore. Iyada oo laxiriirta qeybta sawirrada, kamaradaha gadaal gadaal ayaa sidoo kale isticmaalaya wajiga laba-abuurka autofocus wuxuuna leeyahay aqoonsi otomaatig ah 206 muuqaalo kala duwan, faahfaahin ah in qofna uusan rabin inuu dhiibo hadda, xitaa xitaa moodada.
Laakiin aan ka hadalno madax-bannaanida. Batroolka aadka u badan ee 5,500 mAh ayaa haysan kara 10 saacadood oo ciyaar aan joogsi lahayn, 17 saacadood oo ciyaar video ah gudaha, e 233 saacadood oo dhageysiga muusikada. Waad ku mahadsan tahay lacagta dhakhsaha leh, waad dhaafi doontaa 0 illaa 71% hal saac gudahood, inaanu weligaa qalalanayn.
Ka bixida iyo Qiimaha
Xiaomi Mi Max 3 waxaa laga heli karaa Shiinaha laga bilaabo 20ka Luulyo midabada Meteorite Black, Dream Dahab iyo Buluug mugdi ah. Qiimuhu wuxuu ka bilowdaa 1,699 yuan (qiyaastii € 215) oo loogu talagalay Moodeelka 4/64 GB oo gaadha 1999 yuan (qiyaastii € 255) ee 6/128 GB mid. Wali wax faahfaahin ah lagama bixinin sii deyntiisa Talyaaniga, laakiin hadda shey kasta oo cusub oo ‘Xiaomi’ ah waxaad moodaa inuu ku sii jeedo suuqyadeena, waqti dhow ama goor dhow, marka waa inaan sugnaa uun.
Via: FonearenaXigasho: Weibo, Xiaomi